အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး နောင်တ – အောငျနိုငျသူ
အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး နောင်တ
Aung Naing Thu | November 30, 2020 | Life Style | No Comments
အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး နောင်တ
ပိုက်ဆံတော်တော်လေး ချမ်းသာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့ ကျွန်တော် မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။သူက လောကကြီးကနေ ထွက်သွားတာ သုံး လေးနှစ်လောက်ရှိနေပါပြီ။
သူ့ဆီမှာ ကင်ဆာရောဂါရှိနေမှန်း သိရချိန်မှာတော့ တနေ့ သူ ကျွန်တော့်ဆီ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ညနေဖက် အားရင် ရွှေတိဂုံဘုရားသွားဖူးကြရအောင်တဲ့။အဲ့ဒီညနေ ကျွန်တော်လဲ အားနေတာနဲ့ ညနေ ခြောက်နာရီလောက်
ရွှေတိဂုံ ဘုရားရောက်သွားတာ။ဘုရား ရင်ပြင်တော်ရဲ့ ထောင့်တနေရာမှာ ထိုင်နေရင်းနဲ့ ဆရာကျော် ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့။ကျွန်တော်လဲ သူ နောက်နေတယ်ထင်ပြီးတော့ အကို ဒီနေ့ ဝတ်ထားတာ တော်တော်လေး ကြည့်ကောင်းပါတယ်လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။သူက ထပ်ပြောတယ်။
သူ အတည်ပြောနေတာ သူ့ကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။စိတ်နေသဘောထားနဲ့ စသည်ဖြင့် စိတ်ထဲရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါတဲ့။ကျွန်တော်လဲ အကိုက ချမ်းသာတယ်၊ သူတပါးကို ကူညီတယ်၊ တပည့်တွေကလဲ ချစ်တယ်၊ ဘာသာရေးလဲ ကိုင်းရှိုင်းတယ်။ကျွန်တော် အဖြေကို ပြုံးပြီးနားထောင်နေတယ်။
ခဏကြာတော့ ခေါင်းခါတယ်။မဟုတ်ဖူး.. ဆရာကျော်တဲ့။ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အခုလို အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကို လူနှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကို ရက်ရက်စက်စက် ချနင်းခဲ့ဖူးတယ်တဲ့။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေပါ။ စီးပွားရေး partner တွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြောင့် သူတို့တွေ ဘဝပျက်သွားတယ်၊သူတို့ စီးပွားရေးတွေကို ကျွန်တော် သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်တဲ့ လုပ်နေတဲ့ အချိန်၊ လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိပေါ့။
ကျွန်တော် ကိုယ် ကျွန်တော် မှန်တယ်လို့ဘဲ ထင်နေခဲ့တာဗျာ။အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကျွန်တော် မှားမှန်း သိလာတယ်၊ နောက်ပိုင်း ညဖက်တွေ အိပ်မပျော်တော့ဘူးဗျာ။အိပ်ဆေးတွေသောက်ပြီး ကြိုးစား အိပ် ခဏဘဲ အိပ်လို့ရတယ်တဲ့။ဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း ဘာသာရေးတွေ အရမ်းလုပ်လာဖြစ်တယ်တဲ့။
အခုလို ကင်ဆာရောဂါရှိနေမှန်း သိလိုက်ရချိန် ကျွန်တော့် အမှားကို ကျွန်တော် ပိုပြီး နောင်တရလာတယ်။ တစုံတယောက်ကို ဖွင့်ပြောဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ပြောမထွက်ခဲ့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော် သိပ်မှားသွားတယ်တဲ့။
ငွေကြေး၊ ချမ်းသာမှုဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်သေရင် ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေပါ။ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ လူနှစ်ယောက်ကိုတော့ ဘဝပျက်တဲ့အထိ လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကြီးကို ကျွန်တော် သံသရာတစ်လျောက်လုံး သယ်သွားရတော့မယ်တဲ့။
ကျွန်တော်လဲ အကို အဲ့ဒီမိသားစုတွေကို ရှာကြည့်ပါလား။သူတို့ကို တခုခု ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါလားဆိုတော့ဗျာ သူကြောင့် ဘဝပျက်သွားခဲ့ရတဲ့ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးတွေကို သူ့အလုပ်မှာ ခန့်ထားတာ ကြာပါပြီတဲ့ဗျာ။လိုလေသေးမရှိလဲ ထောက်ပံ့ထားပါတယ်တဲ့လေ။တခုဘဲ
သူကြောင့် သူတို့မိသားစု ဘဝပျက်သွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ သူတို့တွေ မသိကြဘူးတဲ့လေတဲ့။“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူဌေး”လို့…တခွန်းပြောလိုက်တိုင်း ခင်ဗျားကြောင့် ကျုပ်တို့မိသားစု ဘဝပျက်ခဲ့ရတာ ဆိုပြီးဘဲ ကြားနေမိတယ်တဲ့လေဗျာ။သူ နောက်ဆုံးပြောခဲ့တာကတော့ မတော်လောဘ
ကိုယ်စားမယ့် ထမင်းလုတ်ထဲမှာ သူတပါးမျက်ရည် ဘယ်တော့မှ မပါစေနဲ့ တဲ့လေ နှစ်တွေကြာညောင်းခဲ့ပြီတဲ့။သူလဲ ဘယ်ဘုံဘဝတွေ ရောက်နေပြီလဲ မသိ…လူ့ဘဝဆိုတာ ခဏတာပါ။
ဒီဘဝမှာ ဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့သလဲ ကိုယ့်ဘဝကိုရှင်သန်အောင် တည်ဆောက်ရင်း…ဘာတွေကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့မိသလဲ။ဘာတွေဆိုးအောင်လုပ်ခဲ့မိသလဲ ဆိုတာက မှ
သံသရာတစ်လျှောက်မှာ အရိပ်လို လိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့…. ကိုယ်စားမယ် ထမင်းလုပ်ထဲမှာ …သူတပါးမျက်ရည် မပါအောင်…သတိထားပါ.. မိတ်ဆွေတဲ့။credit:NDDPT – Zalun
Unicode…အောငျမွငျနတေဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ တဈယောကျရဲ့ နောကျဆုံး နောငျတ
ပိုကျဆံတျောတျောလေး ခမျြးသာတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတယောကျနဲ့ ကြှနျတျော မိတျဆှဖွေဈခဲ့ဖူးတယျ။သူက လောကကွီးကနေ ထှကျသှားတာ သုံး လေးနှဈလောကျရှိနပေါပွီ။
သူ့ဆီမှာ ကငျဆာရောဂါရှိနမှေနျး သိရခြိနျမှာတော့ တနေ့ သူ ကြှနျတေျာ့ဆီ ဖုနျးဆကျလာတယျ။ညနဖေကျ အားရငျ ရှတေိဂုံဘုရားသှားဖူးကွရအောငျတဲ့။အဲ့ဒီညနေ ကြှနျတျောလဲ အားနတောနဲ့ ညနေ ခွောကျနာရီလောကျ
ရှတေိဂုံ ဘုရားရောကျသှားတာ။ဘုရား ရငျပွငျတျောရဲ့ ထောငျ့တနရောမှာ ထိုငျနရေငျးနဲ့ ဆရာကြျော ကြှနျတေျာ့ကို ဘယျလိုမွငျလဲတဲ့။ကြှနျတျောလဲ သူ နောကျနတေယျထငျပွီးတော့ အကို ဒီနေ့ ဝတျထားတာ တျောတျောလေး ကွညျ့ကောငျးပါတယျလို့ ပွနျဖွလေိုကျတယျ။သူက ထပျပွောတယျ။
သူ အတညျပွောနတော သူ့ကို ဘယျလိုမွငျလဲ။စိတျနသေဘောထားနဲ့ စသညျဖွငျ့ စိတျထဲရှိတာ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပါတဲ့။ကြှနျတျောလဲ အကိုက ခမျြးသာတယျ၊ သူတပါးကို ကူညီတယျ၊ တပညျ့တှကေလဲ ခဈြတယျ၊ ဘာသာရေးလဲ ကိုငျးရှိုငျးတယျ။ကြှနျတျော အဖွကေို ပွုံးပွီးနားထောငျနတေယျ။
ခဏကွာတော့ ခေါငျးခါတယျ။မဟုတျဖူး.. ဆရာကြျောတဲ့။ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ အခုလို အောငျမွငျတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတယောကျဖွဈလာဖို့အတှကျကို လူနှဈယောကျရဲ့ ဘဝကို ရကျရကျစကျစကျ ခနြငျးခဲ့ဖူးတယျတဲ့။
လုပျဖျောကိုငျဖကျတှပေါ။ စီးပှားရေး partner တှပေေါ့ဗြာ။ကြှနျတျောကွောငျ့ သူတို့တှေ ဘဝပကျြသှားတယျ၊သူတို့ စီးပှားရေးတှကေို ကြှနျတျော သိမျးပိုကျခဲ့တယျတဲ့ လုပျနတေဲ့ အခြိနျ၊ လုပျပွီးတဲ့အခြိနျအထိပေါ့။
ကြှနျတျော ကိုယျ ကြှနျတျော မှနျတယျလို့ဘဲ ထငျနခေဲ့တာဗြာ။အခြိနျကွာလာတာနဲ့ အမြှ ကြှနျတျော မှားမှနျး သိလာတယျ၊ နောကျပိုငျး ညဖကျတှေ အိပျမပြျောတော့ဘူးဗြာ။အိပျဆေးတှသေောကျပွီး ကွိုးစား အိပျ ခဏဘဲ အိပျလို့ရတယျတဲ့။ဒီလိုနဲ့ နောကျပိုငျး ဘာသာရေးတှေ အရမျးလုပျလာဖွဈတယျတဲ့။
အခုလို ကငျဆာရောဂါရှိနမှေနျး သိလိုကျရခြိနျ ကြှနျတေျာ့ အမှားကို ကြှနျတျော ပိုပွီး နောငျတရလာတယျ။ တစုံတယောကျကို ဖှငျ့ပွောဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ ပွောမထှကျခဲ့ဘူးဗြာ။ကြှနျတျော သိပျမှားသှားတယျတဲ့။
ငှကွေေး၊ ခမျြးသာမှုဆိုတာ တကယျတော့ ကိုယျသရေငျ ထားခဲ့ရမယျ့အရာတှပေါ။ကြှနျတေျာ့ကို ယုံကွညျပွီး ကြှနျတျောနဲ့ အလုပျတှဲလုပျခဲ့တဲ့ လူနှဈယောကျကိုတော့ ဘဝပကျြတဲ့အထိ လုပျခဲ့တဲ့အမှားကွီးကို ကြှနျတျော သံသရာတဈလြောကျလုံး သယျသှားရတော့မယျတဲ့။
ကြှနျတျောလဲ အကို အဲ့ဒီမိသားစုတှကေို ရှာကွညျ့ပါလား။သူတို့ကို တခုခု ထောကျပံ့ပေးလိုကျပါလားဆိုတော့ဗြာ သူကွောငျ့ ဘဝပကျြသှားခဲ့ရတဲ့ လူနှဈယောကျရဲ့ သားသမီးတှကေို သူ့အလုပျမှာ ခနျ့ထားတာ ကွာပါပွီတဲ့ဗြာ။လိုလသေေးမရှိလဲ ထောကျပံ့ထားပါတယျတဲ့လေ။တခုဘဲ
သူကွောငျ့ သူတို့မိသားစု ဘဝပကျြသှားခဲ့ရတယျဆိုတာတော့ သူတို့တှေ မသိကွဘူးတဲ့လတေဲ့။“ကြေးဇူးတငျပါတယျ သူဌေး”လို့…တခှနျးပွောလိုကျတိုငျး ခငျဗြားကွောငျ့ ကြုပျတို့မိသားစု ဘဝပကျြခဲ့ရတာ ဆိုပွီးဘဲ ကွားနမေိတယျတဲ့လဗြော။သူ နောကျဆုံးပွောခဲ့တာကတော့ မတျောလောဘ
ကိုယျစားမယျ့ ထမငျးလုတျထဲမှာ သူတပါးမကျြရညျ ဘယျတော့မှ မပါစနေဲ့ တဲ့လေ နှဈတှကွောညောငျးခဲ့ပွီတဲ့။သူလဲ ဘယျဘုံဘဝတှေ ရောကျနပွေီလဲ မသိ…လူ့ဘဝဆိုတာ ခဏတာပါ။
ဒီဘဝမှာ ဘယျလိုရှငျသနျခဲ့သလဲ ကိုယျ့ဘဝကိုရှငျသနျအောငျ တညျဆောကျရငျး…ဘာတှကေောငျးအောငျလုပျခဲ့မိသလဲ။ဘာတှဆေိုးအောငျလုပျခဲ့မိသလဲ ဆိုတာက မှ
သံသရာတဈလြှောကျမှာ အရိပျလို လိုကျနမှောဖွဈပါတယျ။ဒီတော့…. ကိုယျစားမယျ ထမငျးလုပျထဲမှာ …သူတပါးမကျြရညျ မပါအောငျ…သတိထားပါ.. မိတျဆှတေဲ့။credit:NDDPT – Zalun
ကလေးမွေးခံနီးမှ မိမိမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်းကို သိရှိခဲ့ရတဲ့ ၁၉ နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီး
မျက်ရည်တွေဝဲနေတဲ့ အသက် (၇၀) ကျော် အဖိုးအိုနဲ့ ဘတ်စ်ကားပေါ်က ဖြစ်ရပ်
ဘုရားကန်တော့ ခြင်းဖြင့် ရရှိလာစေမည့် အကျိုးတရား ၈ မျိုး